ဘုန်းကျော်: ကျနော်တို့ ဗမာတွေ မညံ့ပါဘူး
bala Maung said...
Thanks for Life vitamins.
ကိုဖုန်းကျော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွှန်တော်တို့ မြန်မာတွေမညံပါဘူးဗျာ တကယ်မှန်တယ်။ တိုင်ပြည် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မင်စိုးမင်ညစ်တွေကြောင့် မြေဇာပင်ဖြစ်နေရတဲ့ ဘ၀တွေပါ။ အစိုရ အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေသာ စိတ်ထားတွေကောင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွှန်တော်တို့မြန်မာတွေ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှာ တိုင်ပြည်ပြင်ပမှာ ဒီလို ပညာရပ်တွေ စု့ ကိုင်ပြီး ကျွှန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက် တံခါးမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာ ပံပေးပေးခွင့်ရခဲ့မည်ဆိုရင်တော့ သိပ်ဝမ်းသာချင်ပါတယ်ဗျာ..။